पहिलो भेट नै अन्तिम बनेपछि… « KhabarBiz
पहिलो भेट नै अन्तिम बनेपछि…
आफुले आफुलाई सम्झाउथे । पहिलादेखि मसँग गरेका सबै कुरालाई सम्झिन्थे । लाग्थ्यो संसारमा हाम्रोभन्दा राम्रो जोडि अरु कसैको हुँनै सक्दैन । एक दिनको कुरा हो, राति १ बजेसम्म कुरा गरेर सुत्यो । भोलिपल्ट दिनभरी कुरा भएन । मन खिन्न भयो । फोन पनि अफ, अनलाइनमा पनि आएन । उसको साथिहरुसँग बुझ्दा पनि उनीहरुसँग सम्पर्कमा थिएन । एक मनले रिस पनि उठयो, मन खिन्न भयो । के भयो होला ? किन सम्पर्कमा नआएको होला ? बा के भयो की ? मनमा अनेक कुराहरु सलबलाई रह्यो । मनमा कुरा खेलाउनुभन्दा अरु उपाए पनि त मसँग थिएन । फेसबुक खोलेर हेर्छु, अनलाइन आएको छ कि भनेर । आएको छैन । एति लामो म्यासेज पठाइसके न रिप्लाई आउछ ।
रातिको ९ बजिसकेको थियो अझै ‘रिप्लाई’ नआएपछि, शंकाले भरिएको म्यासेज पठाउँछु । त्यसपछि, ‘बल्ल उ अनलाइन आयो, रिससँगै म खुसी भएँ ।’ के गर्दै छौं ? उ प्रश्न गर्छ । आफूले त्यति लामो मेसेज पठाएको छुँ । अनि त्यसको जवाफ चै दिनुछैन । के गर्दै छौ रे ? प्रश्न देखेर टाउको घुम्यो तर केहि बोलिन । हरेक दिन फेसबुकमा बोल्नेहरुसँग पनि कति गाढासम्बन्ध बसेको है हाम्रो । म केहि नबालेपछि ऊ फेरि लेख्छ, ‘मलाई सारै ‘टेन्सन’ भाको छ ।’
गाली गर्न त खुब मन थियो तर, तनावमा भएको मान्छेलाई के गाली गर्नु भनेर आँट गरिन् । ‘के भयो र ?’ प्रश्न गरे । उसको जवाफ ‘मेरो बिहे गर्दिने रे । आज केटी हेर्न गाको ।’ उनले लेख्यो ।ऊसँगको भविष्य अचानक वर्तमानमै तहसनहस भयो, एकैछिनको भूकम्पले लडाएको घर जस्तै । म मौन बस्छु । मोबाइलको स्क्रिन फेरि कोट्याउँदै रिफ्रेस गर्छु । ‘मलाई त्यो केटी मनै परेन के, कस्तो नरामो लाग्यो’ मेसेज पठाइ सकेको रहेछ।’ मभित्र रिस कि डाह भरिएको थियो, पत्तो पाइन् । एक मनले म हुँदाहुँदै कसरी अरु केटी हेर्न जान तयार भएको होला ? अर्कोतर्फ जे होस् मन त परेन छ नि । तर, उसको मनभित्रको कुरा थाहा पाउन सोध्छु, ‘मभन्दा पनि नराम्ररी ?’ ‘तिमी त कति राम्रो राम्रो नि । त्यो त देख्दै रिस उठ्ने खाल्की’, रिप्लाई गर्छ । ‘म नै माग्न आऊँ कि क्या हो ?’ म उत्ताउलो बनेर पोखिएँ । ‘मलाई पाल्न सक्छौं ?’ सोध्छु ।
‘अरे अहिलेका महिलाहरु आफैं सक्षम भइसके । हामो गाँउमा कतिले बूढालाई पालेका छन् । म नि पाल्न सकि हाल्छु नि । तिमी भन न मात्र म बुवाममिलाई लिएर माग्न आउछु । कति केटा मात्र केटी माग्न जान्छन् । अब केटा माग्न केटी जानुपर्छ ।’ म सुरुवात गर्छु । रिस सरिको भारी मन भएपनि ठट्यउलि पारामा भन्छु । त्यसपछि उ बोलेन । मन परेको मान्छे अरुसँग बोल्दा त रिस उठ्छ, अझ अरुलाई नै हेर्न जादा त झन कस्तो होला ? फेसबुक सुनसान छ, तर दिमाग उम्लिरहेको छ, पृथ्वीको गर्भबाट निस्कन खोज्ने लाभा जस्तै । ऊ गइसकेको १० मिनेट देखाउँछ ।बेडमा पल्टिएर गीत ल्यापटपमा घन्काउछु । मन पनि गीतसँगै बगिरहन्छ । आखाँबाट आसु रोकिएको छैन । उसलाई सोध्ने आट पनि छैन । साच्चै उसलाई पनि त टेन्सन भएको होला । यो बेलामा मैले अरु कुरा भने झन् ‘टेनसन’ हुन्छ भनेर चुपचाप बसे । भन्न त धेरै कुरा थियो तर, भनिन् । बस उसको रिप्लाई पर्खेर बसे ।
फेरी एक डेढ घण्टापछि म्यासेज आयो । ‘ओई लाटि साच्चै पत्याको हो ?’ आखा चिम्लिएर हाँसेको एमोजिसहित । म झसँग भए । उसको म्यासेज देखेर । मेरो पुरै दिमाग खालि भयो । कहाँबाट के बोल्ने पतो भएन । म मौन बसे । मनमा अनेक कुरा खेल्न थाले । आज यो केटालाई के भएको छ । घरी के भन्छ घरी के भन्छ। साच्चै केटि हेर्न नगएकै हो त ?, हो भने किन अघि यसो भने को त ? फेरि म्यासेज आयो, ‘लाटि त के गरेर बसेकी ? त हुँदाहुँदै म अर्को केटी हेर्न जान्छु होला त ? मैले त तइले माया गर्छस् कि गर्दैनस्, के गर्छस्, के भन्छस्’ भनेर टेष्ट पो गरेको त।
म मौन छु । उ फेरी भन्छ, ‘ओई म्यासेज रिप्लाई गर न यार । म तेरो रिप्लाईलाई कुरिरहेको छु । त रिसाको हो बन्ठि मसँग । सरि ल । रिप्लाई गरिनस् भने त फेरी म कल गर्छु नि । तलाई थाहा होला नि मेरो बानी ।’ लभको इमोजिसहित । अरे वा मान्छेको दिमागमा के के कुरा खेल्छ होला ? मान्छे दिनभरी कस्तो अवस्थामा बसेको छ थाहा छैन। यो कस्तो तरिका हो ? माया परीक्षा गर्ने ? के तपाईहरु बीच पनि यस्तो परीक्षा हुन्छ ? उसले कहिले पनि यस्तो गरेको थिएन । पहिला भनेको कुरासहि हो कि पछि भनेको कुरा सहि हो । मैले छुट्याउन सकिन । के म्यासेज गरु के भनौं केहि पत्तै भएन । हासेको र लभको इमोजि पठाए ।
कति अच्चम है आफ्नो मन रुइरहेको छ, तर हासेको इमोजि पठाएपछि उसलाई खुसी छ भनेर थाहा हुने । साच्चै इमोजि जस्तै छ है उसले भनेका कुरा । केटि हेर्न गएर मलाई ढाटेको पनि त हुनसक्छ अथवा साच्चै माया गर्छ की गर्दैन भनेर पनि यसो गरेको हुन सक्छ । म भित्र द्वन्द शुरु भयो । कसरी पत्ता लगाउने कुनै उपाए देखिन । म विरामी छु भोली कुरा गर्ने भनेर म्यासेज पठाए र फेसबुक ‘लगआउट’ गरे, तर मनबाट यी कुरा ‘लगआउट’ गर्न सकिन । उसले प्रेमको सुरुवातदेखि नै भन्थ्यो, ‘तिमी धेरै रिसाहा छौ । सानो कुरामा धेरै रिसाउँछौ । यस्तो रिसको सुरमा कुनै दिन मलाई छोड्छौ कि झैं लाग्छ’, म चाहिँ भन्ने गर्थेँ, म हैन तिमी रिसाहा र धेरै जिद्धी छौ ।’ उ के मसँग टाढिन लागे कै हो त ? भोली पल्टदेखि उ नर्मल कुरा गर्न थाल्यो । म पनि केहि नभएझै गरी बोल्थे । कसरी के भन्ने कुनै उपाय भेटेको थिइन्, मैले । मन भारी थियो तर पनि खुसीको नाटक गरिरहे ।
बिस्तारै पहिलाको जस्तै कुरा हुन थाल्यो । त्यसको केहि समयपछि उसले भन्यो, बन्ठि आज म एउटा कुरा माग्छु, दिन्छस् ? मैले भने, ‘के कुरा हो भनन् पहिला अनि पो थाहा हुन्छ त ।’ फेरी उसले भन्यो, ‘नाई पहिला रिसाउदिन, दिन्छु भन अनि । के तलाई मेरो विश्वास लाग्दैन ?’ मैले भने, ‘ल भन के हो म रिसाउदिन प्रमिस ।’
अनि भने ‘तिमीले यत्तिको लागि प्रेम गरेको हो ?’ ‘हो, मैले सेक्सको लागि प्रेम गरेको हो । तर, सेक्सको लागि मात्रै चाहिँ पनि होइन, सेक्सले प्रेमलाई अझ गाढा बनाउँछ ।’ त्यहि भएर भनेको । तिमीले मसँग सेक्स गरेनौं भने तिमीले मलाई माया नै गर्दैनौं भनेर बुझछु । अरे यो मायाको कस्तो परक्षिा हो ? के मायामा पास हुनका लागि यहि एउटा तरिका हो ? मेले कुरै बुझिन । धेरै समय हाम्रो यसै विषयमा झगडा भइरह्यो ।
अन्त्यमा हाम्रो प्रेमको अन्त्य पनि भयो । त्यसपछि गाडी चडेर म फर्किए । मलाई लगेको थियो, हाम्रो भेट भएसँगै हामीबीच भएको अविश्वास सव खतम हुन्छ र नयाँ अध्याए शुरु हुन्छ । तर, के थाहा मलाई पहिलो भेट नै अन्तिम हुन्छ भनेर । मलाई लागेको पनि थिएन की हाम्रो माया यसरी टुक्रिन्छ । यस्तो पनि हुन्छ मायाको परीक्षा। आँखामा र मनमा हलचल हुनु अस्वभाविक थिएन । तर, रुनुको कुनै खास कारण पनि त थिएन । आफैलाई कठोर बनाएँ, र भने जीवन चल्दै गरेको गाडी हो । मलाई धेरै यात्रा तय गर्नुछ । न उसले फोन म्यासेज गर्ने जमर्को गर्यो न मैले ।